‘सरकार चलाउने म्यान्डेट आएको छ, ओली-दाहाल दायाँबायाँ गर्ने होइन’ -पूर्वगृहमन्त्री बस्नेत | Ekhabaronline.com
| प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस १४, २०७४ 8:51:00 AM | 137 पटक पढिएको |
एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता र सरकार गठबनको विषय चर्चामा छ । चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने भनेर दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले भने पनि सोँचे अनुसारको काम हुन नसकेको भन्दै कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ । जसले गर्दा पार्टी एकतामा समस्या देखिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विशेषगरी सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व कसकसले गर्ने भन्नेमा एमाले र माओवादी विभाजित देखिएका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीः
एमालेको सिद्धान्त बहुदलीय जनवादमा जान नहुने तर्क माओवादीका नेताहरुले गरेका छन् । माओवादी एमालेमा विलय हुन लाग्यो भन्ने
कुरा पनि आएको छ । यसले एकता प्रभावित हुँदैन ?
नीतिगत रुपमा त तपाईहरु एमालेको नीतिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ।
हामी एमालेको नीतिमा प्रवेश गर्न लागेका होइनौं । देशको आवश्यकता अनुसार संविधानमा नै समाजवादउन्मुख भनेर उल्लेख गरेका छौँ । यस्तो अवस्थामा बहुदलीय जनवादको कुरै आउँदैन नि ।
दुईवटा पार्टी मिलाएर तेस्रो पार्टी बनाउने हो । अब एमाले र माओवादी दुईवटै दल रहँदैनन् । तेस्रो पार्टीको नेतृत्व वा नेताहरुको कार्य विभाजन गर्नुपर्छ । यस विषयमा छलफल र बहसबाट निष्कर्षका निकाल्छौँ । नेतृत्वको विषयमा विवाद हुँदैन ।‘
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका विषयमा दुबै दलका फरक फरक नेताहरुबाट फरक फरक भनाई आएको छ । कसरी सहमति हुन्छ ?
संवैधानिक हिसाबले अध्यादेशका बारेमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यो अलि भावनात्मक र व्यवहारिक विषय जस्तो बनाउन खोजिएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा बलियो प्रतिपक्ष हो । राष्ट्रियसभामा उसको पनि उपस्थिती चाहिन्छ । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा नजाँदा कांग्रेसको उपस्थिती नहुन पनि सक्छ ।
यो परिस्थितीमा कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रियसभामा उपस्थिती गराउनका लागि छलफल र सहमति गर्नुपर्छ । तर कांग्रेसले पनि सल्लाह नै नगरी बहुमतिय विधि हटाएर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राखेको हो । यसले गर्दा विवाद देखिनु स्वभाविक हो । अब विवादलाई लम्ब्याउने होइन, समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।